पुल्चोक बस्दै आएका मन्त्रीलाई भैँसेपाटीमा नयाँ क्वाटर! भीआइपीलाई ४१ भवन बनाउँदै सरकार :: BIZMANDU
पुल्चोक बस्दै आएका मन्त्रीलाई भैँसेपाटीमा नयाँ क्वाटर! भीआइपीलाई ४१ भवन बनाउँदै सरकार
प्रकाशित मिति: Dec 6, 2018 8:05 PM
काठमाडौं। सरकारले ललितपुरको भैँसेपाटीमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपसभामुखसहित मन्त्रीहरुका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ललितपुर महानगरपालिका सैबु भैँसेपाटीमा रहेको सैबु आवास क्षेत्रमा रहेको १४९ रोपनी चार आना ३.२८ दाम जग्गामा भीआइपीका लागि ४१ वटा भवन बनाउने निर्णय गरेको हो।
पुल्चोक बस्दै आएका मन्त्रीलाई भैँसेपाटीमा नयाँ क्वाटर! भीआइपीलाई ४१ भवन बनाउँदै सरकार को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।